सरकार र डा. गोविन्द केसी बीच पाँच बुँदे सम्झौता
काठमाडौ पुस २९
सरकार र डा. गोविन्द केसी बीच पाँच बुदेँ सम्झौता भएको छ । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकार बीच भएको पाँच बुँदे सम्झौता पछि उनले अनसन तोडेका छन् । शुक्रबार राति सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शनिबार बिहान १० बजे अनसन तोडेका हुन् । सरकारका तर्फवाट स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहोरा र केसी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सरकार र केसीबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्ने, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनमा प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिवि कुलपतिले यथाशीघ्र र यथोचित कदम लिने बुँदा समेत सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । केसीको प्रमुख मागमध्ये प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा बारे भने कुनै सहमति भएको छैन ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीनमा शशि शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए सँगै केसी त्यसको खारेजी र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै पुस २४ गते देखी डा. केसी अनसन बसेका थिए । पुस २४ गते अनसन वसेका केसीलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वाेच्चले पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको २ दिनपछि अदालतकै आदेशमा उनी सामान्य तारिकमा रिहा भएका थिए ।
उनले जुत्ता सिलाइ पेसा गर्ने नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका छन्